Zvichaita marii kutsiva chinovhara che iPhone 6s uye iPhone 6s Plus? | IPhone nhau
Zvichaita marii kutsiva chinovhara che iPhone 6s uye iPhone 6s Plus?
Cristina Torres chinobata mufananidzo | | iPhone 6s, IPhone 6s Plus
ari iPhone 6s mitengo and the IPhone 6s Plus Ivo vakaita vazhinji kufunga zvakare thesis yekuchinja iPhones gore rega rega. Ichokwadi ndechekuti kushoropodzwa kweApple kwave kwakasimba, uye kudonha kweeuro hakuna kubatsira kudzikamisa. Muchokwadi, Apple inochengetedza mitengo yekugadzira pamatanho akaderera kana mashoma, asi haazeze kubheja pane thesis iyo iPhones inotengeswa chero mutengo kutora mukana wenguva yega yega kuti vakwanise kuwedzera. Kana iri iPhone 6s mutsauko neiyo iPhone 6 haingogadziri mutengo chete.
Zvisinei, uzivi hwe chengeta mitengo ye iPhone kuburikidza nedenga remba Haisi chimwe chinhu chinonamirwa chete mune iyo iPhone 6s uye yepazasi magumo. Apple inoshandisa thesis imwechete muzvikamu zvayo uye, pamwe kana iwe uchiziva kuti chinozokubhadharira marii kana uine rombo rakaipa iro iPhone 6s kana iPhone 6s Plus inotsemuka, ndinofunga unozopedzisira watenga imwe yeaya anovhara anovachengetedza kubva kunyanya. Zvinobuda neziso rakanaka pachiso here?
Mubvunzo mukuru we Zvichaita marii sei kutsiva chinovhara che iPhone 6s uye iPhone 6s Plus atova nemhinduro yepamutemo. Kunyangwe senge ingangoita zvese zvine chekuita neApple, zvaive zvakanaka kumirira mhinduro yepamutemo. Mune inotevera runyorwa iwe unogona kuziva nekuti ese mamodheru ataurwa:
iPhone 6s Uyezve: $ 149
iPhone 6s, iPhone 6 Uyezve, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5: $ 129
Kana isu tichifunga nezve izvo mukuwedzera, kana tichida kuti iiswe pane iyo smartphone, isu tinofanirwa kuisa imwe yekuwedzera mutengo wekutumira mutengo we $ 6,95. Uye zvakare, mitengo yese parizvino iri mumadhora uye kuUnited States hakuna VAT yakadai. Naizvozvo, zvingangoita kuti muEurope zviverengero zvakakwirira zvakanyanya. Zvirinani kutarisira zvakanaka iyo iPhone skrini!
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 6s » Zvichaita marii kutsiva chinovhara che iPhone 6s uye iPhone 6s Plus?
yakawanda sei iphone 6s skrini ????
Maitiro ekuparadzanisa yako Apple Watch ne iPhone nyowani pasina kurasikirwa nedata
iPhone 6s Plus vs. Galaxy S6 Edge +: makamera anotarisana-mberi [mifananidzo]